Huawei Watch 3 na FreeBuds 4, ịkụ nzọ na njedebe dị elu na wearables | Akụrụngwa Akụkọ
Miguel Hernandez | 02/06/2021 19:25 | General, Noticias
Companylọ ọrụ Asia emeela ngosi nke mba ụwa nke mere ka anyị nwee ike ileba anya na akụkọ ga-abata na nkeji iri na ise. N’oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ike iwetara gị nyocha miri emi nke ngwaọrụ ndị a niile, n’ime oge a anyị ga-agwa gị ihe akụkọ ha bụ.
Huawei gbanwere ahịa ya na Huawei Watch 3 na Watch 3 Pro ọhụrụ yana ụda kachasị mma na ekweisi ya TWS FreeBuds 4. Ka anyị hụ ihe mmelite niile nke Huawei kwere na ngwaọrụ ọhụrụ ya gụnyere ma ọ bụrụ na ọ bara uru ịkụ nzọ na akụkọ ndị a niile.
1 Huawei Watch 3 na Watch 3 Pro
Huawei Watch 3 na Watch 3 Pro
Anyị na-amalite site na elekere ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ Eshia, ọ na-ewepụta ihe okirikiri na-arụzigharị nke ọma. Ọ ga-anọgide na-esonyere bọtịnụ igwe, ọ bụ ezie na n'oge a, ha etinyela "okpueze" okirikiri nke ga-eme ka anyị nwee ike ịmekọrịta Mmetụta 2 dị ka Sistemụ nrụọrụ. Ha abụọ ga-arịgo otu panel 1,43 ″ AMOLED jiri 1000 nits, ebe ụdị "Pro" ga-enwe sapphire kristal.
Hi6262 ga-abụ nhazi nke na-elekọta ọrụ yana 2 GB nke RAM na 16 GB nke nchekwa zuru ezu. Anyị ga-enwe njikọta 4G site na eSIM, ihe nlele obi, ọbara oxygen, WiFi, Bluetooth 5.2 na n'ezie NFC. Nke a ga - enyere anyị aka inyocha ọtụtụ ọnụọgụ, yana soro ọzụzụ anyị site na GPS, nke ga - abụ ọwa abụọ n'ihe banyere mbipute Pro.
Ọgbọ nke anọ nke ụdị ọkpụkpọ kachasị ewu ewu na ika jiri agba dị ụtọ na nke na-akwụ ụgwọ amata nke ọma. Huawei emeela ka ha nwekwuo ike, dịkwuo mfe ma na tiori dị ike karị. Ha ga-enye njikọta Bluetooth 5.2 na batrị 30 mAh maka earbud ọ bụla na 410 mAh n'okwu ikpe.
N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe Oge 4 nke nnwere onwe na ekweisi na oge 20 ọzọ na ikpe. Anyị nwere ike ijikọ ha na ngwaọrụ abụọ n'otu oge ekele maka njikọ abụọ na naanị 90 ms nke latency. Have nwere ugbu a Nkagbu Noise na-arụsi ọrụ ike dị ike ruo 25 dB n'agbanyeghị enweghị ngwaọrụ iche. Ọ na-enweta ọrụ nke FreeBuds 3 na njikọta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Huawei Watch 3 na FreeBuds 4, ịkụ nzọ na njedebe dị elu na wearables